मुलुकभर थप १८०१ जनामा को’रोना पुष्टि, २४ जनाको मृ’त्यु ! – Nepal Online Khabar
मुलुकभर थप १८०१ जनामा को’रोना पुष्टि, २४ जनाको मृ’त्यु !
भाद्र ७, २०७८ सोमबार 189
काठमाडौं : मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ८०१ जनामा को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ११ हजार३२६ जनाको आरटी–पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा १ हजार ८०१ जनामा को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार ८ हजार ७०४ जनाको आरटी–पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा १ हजार ५४८ जना र २ हजार ६२२ जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा २ सय ५३ जनामा को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको हो ।योसँगै नेपालमा को’रोना भा’इरस सं’क्रमितको कुल संख्या ८ लाख २९ हजार ४४३ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा १९२४जना को’रोनामुक्त भए, २४ को मृ’त्यु
को’रोना भा’इरसको सं’क्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ हजार ९२४जना निको भएर घर फर्किएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना सं’क्रमणमुक्त हुनेहरुको संख्या ७ लाख ९७ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ११ हजार ३२६ जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल ४२ लाख७४हजार ५७२जनाको पीसीआर–एन्टिजेन परीक्षण भएको छ ।यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा थप २४ सं’क्रमितको मृ’त्यु भएको छ । हालसम्म नेपालमा को’रोना सं’क्रमणबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या १० हजार ५३३ पुगेको छ ।
Prevजेबी टुहुरेको उपचार गर्न आ’र्थिक स’मस्या !
Nextएमालेबाट छुट्टिएका माधव नेपालसहितका नेता चन्द्रागिरी रिसोर्टमा, ६० वटा कोठा बुकिङ !
राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खा’रेज गर्न जसपा अध्यक्ष यादवको आग्रह !
अफगानिस्तानमा सबक पाउँदा पनि पश्चिमा देशहरु सुध्रिएनन् : पुटिन !
प्रधानमन्त्रीको स’क्रियता बढ्याे, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने आशंका !
खाली पेटमा तुलसी पानीको फाइदा !
४ बर्षसम्म एउटा पनि विकास नगरेको भन्दै वडाध्यक्षलाई बिजुलीको पोलमा बा’धियो (2273)
ओलीवि’रुद्ध लड्न मलाई घचेटेर अघि बढाए, पछि फर्केर हेर्दा कोही पनि छैन :- माधव नेपाल ! (1502)
अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली भन्छन्ः हामी जोखिममा छौं, छिटो उद्धार होस् (1490)
यी महिना जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् करोडपति , कुन महिना जन्मिने व्यक्ति कति धनि ? जान्नु-होस् ! (920)